Umaki: IVR | Martech Zone
I-Transera inikeza iSoftware njengoSizo, ipulatifomu ye-analytics ephethwe ngamafu yezikhungo zezingcingo ukukala ukuzibandakanya kwamakhasimende. I-Transera Customer Engagement Analyzer uhlelo lokusebenza lwe-analytics olusebenzayo ukwenza ukuhlaziywa kokusebenzisana kwamakhasimende nomsebenzi we-ejenti ukuthola ukuthi yini ekhiqiza imiphumela emihle yebhizinisi. Le mininingwane ingasetshenziselwa ukushintsha ukusebenza kwama-ejenti kanye nezinhlelo zesikhungo sokuxhumana ezisuselwa emafini ukushayela ukusebenza okungcono kanye nokuhlangenwe nakho kwamakhasimende. I-Analyzer Engagement Customer ihlanganisa ndawonye
NgoLwesibili, ngo-Mashi 24, i-2009 ISonto, Ephreli 24, 2016 Douglas Karr
NgoMsombuluko, ngibe nethuba lokuhambela ukusebenzisana, ngilalele futhi ngibone uhlelo lwabo lusebenza, futhi ngisebenzise ukuboniswa okugcwele kukaHey Otto - uhlelo lwezinkomfa zezwi nolwewebhu olusebenzisa ubuchwepheshe bokusebenzisana emuva. Izinkampani ezinezikhungo ezinkulu zezingcingo zehla ngemigwaqo emibili ehlukene, kungaba amasistimu wokuqashelwa kokukhuluma (i-ASR) noma ngokusebenzisa amakamelo amakhulu abizayo abasizi bezikhungo zezingcingo. Ucingo olujwayelekile oluya ku-IVR luyakhathaza, futhi